Amaphrojekthi namacala |
UJinan Licheng Wanxiang Xintian School
I-ILBEST LCD Sliding Blackboard yethulwe egumbini lokucwaninga ngamakhemikhali kanye ne-physics yeJinan Licheng Wanxiang Xintian School. Njengesici esiyingqayizivele sebhodi yethu emnyama ye-LCD, ukungafakwa uthuli bekulokhu kuhambelana ngokuphelele nesicelo samalabhoratri angenalo uthuli futhi nokwenza igumbi lihlanzeke kakhulu kunangaphambili.
Umqondisi wesikole ukhuluma kakhulu nge-ILBEST LCD Blackboard. Ukholelwa ukuthi impilo yabafundisi neyabafundi iqinisekiswa ngokugwema ukungcola kothuli emigodini. Kulula kakhulu ukusula umbhalo obhalwe ebhodini ngokucindezela inkinobho eyodwa. Abasoze bahlushwa uthuli futhi basula ibhodi elimnyama.
UJinan Changqing University-Affiliated Junior High School
Leli ikilasi laseJinan Changqing University-Affiliated Junior High School. Uthisha wezibalo ubhala ebhodini le-LONBEST LCD. Iphaneli eyisicaba esebenzisana nayo iphakathi nendawo yokulinganisa ibhodi elimnyama. Ukugqwala nothuli nomsebenzi owodwa wokususa ukhiye kwenza sikwazi ukugwema ukungcoliswa kothuli. Ukubona ngamehlo kwabafundi kuqinisekisiwe ngenxa yesici esikhanyayo esiluhlaza okwesibhakabhaka nesici esingesilo semisebe. Abafundi ngemuva kwekilasi nabo bangakubona umbhalo wesandla ngokucacile.
Impendulo evela kuthisha: Othisha esikoleni kukhombisa ukuthi othisha bavame ukukhwehlela ngenxa yothuli olwenziwe ngenkathi kubhalwa nokusula. Futhi abafundi bakhathazwa yiluthuli, futhi ikakhulukazi phambili, okuyinto ekhathaza othisha nabafundi kakhulu. Ibhodi emnyama ye-ILBEST LCD idala indawo ehlanzekile engenalo uthuli kubo bonke othisha nakubafundi. Ngaphezu kwalokho, ichopho lakho konke ukugwazwa kungakhonjiswa kufana ne-calligraphy.
IPanama International School
I-ILBBLE ye-LCD Blackboard ithatha indawo yebhodi yokulinganisa yendabuko kanye nebhodi elimhlophe, ihlinzeke ngemvelo yokufundisa ehlanzekile nenempilo yokufundisa ePanama International School nokusiza othisha nakubafundi ukwenza ngcono ukusebenza kwabo kokufundisa.
Ukugqwala nothuli nomsebenzi owodwa wokususa ukhiye kwenza sikwazi ukugwema ukungcoliswa kothuli. Ukubona ngamehlo kwabafundi kuqinisekisiwe ngenxa yesici esikhanyayo esiluhlaza okwesibhakabhaka nesici esingesilo semisebe. Abafundi ngemuva kwekilasi nabo bangakubona umbhalo wesandla ngokucacile.
I-Tai'an Zhiyuan Primary School
Lesi yisigaba samaShayina saseTai'an Zhiyuan Primary School. Uthisha ubhale isishwankathelo sombhalo ebhodini elimnyama le-LONBEST LCD ukuvumela abafundi ukuthi baphinde bayilandise le ndaba ngokusho kwemibono ebhalwe ebhodini. I-engeli ebanzi ebanzi yenza kube lula ukuthi abafundi abasemuva bakwazi ukubona umbhalo kahle. Ngaphezu kwalokho, umbala oluhlaza ungadonsela ukunaka kwabafundi futhi uvikele ukubona kwamehlo.
Impendulo evela kuthisha: Omunye wothisha esikoleni ukhombisa ukuthi abazali baneliseke kakhulu ngebhodi le-LONBEST LCD. Izingane zijabule kakhulu ngenkathi zinamakilasi futhi zithanda ukubhala ngebhodi elimnyama ngesikhathi sekhefu, ngoba lokhu kuyinto entsha ngokuphelele kubo futhi bonke bafuna ukuzama. Ngaphezu kwakho konke, umsebenzi owodwa wokususa ukhiye futhi uthuthukisa ukusebenza kahle kokufundisa. Umsebenzi uxazulula ubunzima bokusula ibhodi lezingane ezisezingeni eliphansi.
Umbukiso womlingani wethu eThailand
Leli yigumbi lokubonisa lozakwethu eThailand. Ibuyisela isimo sangempela sehhovisi lebhizinisi. I-LCD sliding board ingasetshenziswa emakamelweni ezinkomfa nabantu abacishe babe yi-10. Ihhovisi elincane elinabantu abangama-4-5 bangakhetha ibhodi lokubhalela le-LCD (52 '' / 66 '' / 60 '').
Ibhodi lokubhala le-LCD lingabekwa odongeni noma lifakwe kubakaki ohambisa izinto. Abasebenzisi abasoze besaba ukulahlekelwa yizimpawu noma izikejana, futhi, ngoba babekwazi nokubhala ngeminwe noma ezinye izinto ezinzima ngobulukhuni obulingene. Akukho okudingekayo okudingekayo, ukonga imali.
Igumbi lethu lombukiso eShenzhen
Indlunkulu yethu yenkampani iseJinan, sakha negatsha eShenzhen, wamukelekile ukusivakashela.
I-LCD yethu Ibhodi emnyama yathatha indawo yebhodi lomshini, ikuqede ngokuphelele ukungcoliswa kothuli, futhi ivikele nempilo yothisha kanye neyabafundi.